ကာရန်မဲ့ကဗျာကို ဆရာ့ဆရာကြီးတွေ ဘယ်လိုရှုမြင်ခဲ့ကြသလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Poetry » ကာရန်မဲ့ကဗျာကို ဆရာ့ဆရာကြီးတွေ ဘယ်လိုရှုမြင်ခဲ့ကြသလဲ
ကာရန်မဲ့ကဗျာကို ဆရာ့ဆရာကြီးတွေ ဘယ်လိုရှုမြင်ခဲ့ကြသလဲ
Posted by manawphyulay on Aug 30, 2012 in Poetry | 17 comments
မြန်မာစာပေ ရေစီးကြောင်းကား အားကောင်းမောင်းသန်စွာ စီးဆင်းလျက်ရှိပေသည်။ ခေတ်
တစ်ခေတ်နှင့် တစ်ခေတ် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာကဗျာ အရေးအဖွဲ့ပုံစံဖြစ်၏။
ရှေးယခင့်ယခင် ဂန္တဝင်ပုံစံမှ သွေဖီကာ ကာရန်မဲ့ကဗျာတွေ ရေးလာကြသည်။ ရေးသူကလည်း ရေး၍
အယ်ဒီတာတွေကလည်း ထည့်ပေးနေကြသည်။ ဤတွင် ကာရန်မဲ့ကဗျာ အရေးအသားနှင့် ပတ်သက်၍
စာရေးဆရာကြီးများ၏ ရှုမြင်ပုံကို ကောက်နုတ်တင်ပြလိုပါသည်။
စာရေးဆရာကြီး ဦးရန်အောင်ဆိုလျှင် ကာရန်မဲ့ကဗျာများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်အနှောင့်အယှက် ရှိပုံ
ရသည်။ သည့်အတွက် အောက်ပါအတိုင်း တုံ့ပြန်ရေးသားခဲ့ပါသည်။
အဲဒါ ကဗျာလို့ ခေါ်တယ်”
ဟူသတည်း။ ထိုနည်းတူ စာရေးဆရာကြီး ဦးသိန်းဖေမြင့်ကလည်း…
“ကျွန်တော် ကာရန်မဲ့ကဗျာကို အားမပေးဘူး။ မထောက်ခံဘူး။ မကြိုက်ဘူးလို့ပဲ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်
စဉ်းစားကြည့်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ကာရန်မဲ့ချင်ကြတာလဲ။ ထူးချင်ဆန်းချင်လို့ပဲ။ ဒီ့ပြင် ဘာမှမရှိဘူးလို့ အဖြေ
ထွက်တယ်” ဟူ၍ ပြောခဲ့ပါသည်။ ဆရာဇဝနဆိုလျှင်
“ကာရန်မဲ့ကဗျာကတော့ ဥရောပ အစရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ခေတ်စားနေတာ အတော်ကြာပါပြီ။
ဒီအယူအဆ၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီရောဂါဟာ မြန်မာစာပေနယ်ထဲ ကူးလာတာ မကြာသေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ကတော့
ရှေးကျတယ်ပြောပြော၊ ခေတ်နောက်ကျတယ်ပဲဆိုဆို သမားရိုးကျ ရေးပုံရေးနည်းပဲ ကြိုက်တယ်” ဟူ၍ ပွင့်လင်းစွာ
ဆိုခဲ့ပါသည်။ ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်ကမူ…
“ကာရန်မဲ့ဆိုတာ ကဗျာမှာ မရှိဘူး။ ကာရန်လွတ်လပ်တာပဲရှိတယ်။ အသံပါတယ်။ ရစ်သမ်ပါတယ်။ ကာရန်နဲ့
ရစ်သမ်တစ်ခုခုမပါရင် ကဗျာမဟုတ်ဘူး။ ဖရီးဗာ့ (Free Verse)ကို ကာရန်မဲ့လို့ တလွဲဘာသာပြန်နေကြတယ်။
အမှန်က ကာရန်မဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ကာရန်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ယူနိုင်တာပဲ။ ဖရီး (Free)ကို “မဲ့” နဲ့ “လွတ်လပ်”
အဓိပ္ပာယ်မှားပြီး ဒီမှာ ယူဆနေကြတာ။ ပြီးတော့ ကဗျာလိုင်စင်-ပွတ်တစ်ပ်လိုင်စင်ဆိုတာလည်း ရှိတာပါပဲဗျာ” ဟူ၍
မနောကတော့ ကဗျာရယ် ဘာရယ်မဟုတ်၊ စိတ်ကူးတည့်ရာ ရေးချတတ်လေ့ရှိပါသည်။ ခုတစ်လောတော့ ကဗျာဘက်ကို သိပ်မရောက်ဖြစ်ဘူးဆိုရမှာပေါ့။ ရှင်းရှင်းပြောရင် ဦးနှောက်က ထုတ်လို့ကိုမရဖူးဖြစ်နေတယ်ရှင်။
အဓိက ကဗျာအမျိုးအစား ၂ မျိုးပဲရှိတယ်လို့ သိရှိထားပါတယ်။ ကဗျာရေးသာ ရေးတာ ကဗျာအကြောင်း ဂဃနဏ သိတာမဟုတ်လေတော့ ဖတ်ချင်မိတဲ့စာအုပ်လေးတွေလည်း ရှာတော့ ရှာနေပါတယ်။ မတွေ့သေးလို့ ဘယ်သူတွေဆီမှာများရှိနေမလဲ ငှားဖတ်လို့ရရင် ငှားစေချင်ပါတယ်။ ကဗျာအကြောင်း အသေးစိတ်လေးတွေလည်း လေ့လာချင်လို့ပါ။
ကဗျာ ၂ မျိုးပဲရှိတယ်လို့ လေ့လာမိပါတယ်။
(၁) ခေတ်ပေါ်ကဗျာ (ပင်မရေစီး) Main Stream ဟာ ခံစားမှုကို အားပြုတဲ့ကဗျာဖြစ်ပြီး အနုပညာဆိုတာ ခံစားမှုကို ဖော်ထုတ်ပြတဲ့အရာလို့ ခံယူတယ်။ (Art is expression)
(၂) ခေတ်ပြိုင်ကဗျာ (ရေစီးသစ်) New Stream ကတော့ စိတ်ကူးထည်နဲ့ ဥာဏ်အသိကို အခြေခံပြီး၊ အနုပညာ ဆိုတာ ခံစားမှုကိုဖော်ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လက်မခံဘူး။ (Art is Idea) ခေတ်ပေါ်ကဗျာ က ဖန်တီးမှုလို့ သုံးပေမယ့်၊ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာကတော့ ပြုလုပ်ခြင်း၊ တီထွင်ခြင်းလို့ သုံးတယ်။ (Uncreation is new creation)
Non-expression လို့ဆိုနိုင်တဲ့ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာ အမျိုးအစားထဲမှာ Cyber-poetry, Language poetry, Conceptual poetry, Anti-poetry, Flarf poetry, Visual poetry စသည်ဖြင့် ပါပါတယ်။
တက္ကသိုလ်စန်းရဲ့ ကဗျာဖွဲ့နည်းစာအုပ်လည်း ဖတ်ချင်ပါတယ်။
ဆရာမင်းသုဝဏ်ဆွေးနွေးထားတဲ့ ကဗျာ့ပရိယာယ်စာအုပ်လေးလည်း လေ့လာချင်တယ်။
ဦးကြင်ဥအရေးအသားတွေကို စာဖတ်ရလို့လားမသိဘူး အတော်သဘောကျတယ်။ ခုလိုမျိုး ပဒေသာသီချင်းများ စာအုပ်လေးလည်း ဖတ်ချင်မိတယ်။
လက်ဝဲသုန္ဒရရဲ့ ရတုအကြောင်းအရာလေးတွေလည်း စုံလင်အောင် သိချင်နေမိတယ်။
ဟိုနေ့ကတော့တစ်ရေးနိုးလို့ ထတော့ ဘာရယ်မဟုတ် စပ်လိုက်မိတဲ့စာကြောင်းလေးလည်း ပြောပြရဦးမယ်သိလား။
အိမ်သာ ရေမရှိ။ ။
သိချင်တာတွေ များနေတဲ့ မနောအတွက် စာအုပ်ကောင်းလေးတွေရှိရင် ငှားရမ်းပေးဖတ်ကြပါလို့ပြောပါစေ။
ကဲ ဒီတော့ ရွာထဲမှ ဆရာ့ဆရာကြီးတွေရဲ့အမြင်တွေကိုလည်း ဗဟုသုတလေးတွေ မျှဝေပေးပါဦးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
စာဖတ် စာရေး ….. အားနည်းတဲ့ညီမကတော့ မမနောလိုချင်တဲ့စာအုပ် စာပေမျိုး လက်ဆင့်မကမ်းနိုင်သေး ဘူးမမရယ် ………
ဒါဆိုရင် ရှိတဲ့စာအုပ်တွေ ငှားဖတ်လို့ကော ရမလား ညီမလေး…
ကဗျာစပ်ရတာ စာရေးရတာကို ၀ါသနာပါပါကြောင်း
အခုလို ဗဟုသုတရတဲ့အတွက် ပျော်မိပါကြောင်း
ကဗျာကိုကြိုက်တယ်၊ ကဗျာဖတ်ရတာ ၀ါသနာပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်တိုင်မရေးနိုင်သေးပေမယ့် ကာရန်လွတ်လပ်တဲ့ကဗျာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကာရန်နဲ့ကဗျာပဲဖြစ်ဖြစ် ထာဝရအားပေးဖတ်ရှုမှာပါ၊ ကိုယ်တိုင်ရေး ဖို့လည်း ကြိုးစားပါဦးမယ်။
ကျုပ်ကတော့.. ဖတ်ကောင်းရင်ပြီးတာပဲလို့ ယူဆတယ်…။
မန္တလေးဂေဇက်၊ ကဗျာဟာကာရံပါကိုပါရမယ်တို့၊ မော်ဒန်ကဗျာဟာပြသနာတို့ ပြောဆိုနေကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဘယ်လိုယူဆပါလဲ၊ နောက်ပြီးဒီနေ့ခေတ် performance အပေါ်ဆရာ့အမြင်၊
ဦးဝင်းဖေ၊ ၊ အဲဒီမော်ဒန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြ မန်မာပြည်မှာသာငြင်းခုန်နေတာ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာပြသနာအဖြစ်နဲ့ကိုမရှိတော့ဘူး၊ သူ့နောက်မှာ ပို့စ်မော်ဒန်၊နီယိုမော်ဒန်တွေရှိလာတယ်၊
နောက် performance installation ဆိုတာတွေက အနုပညာနယ်ပယ်သစ်ချဲ့ရင်းချဲ့ရင်းနဲ့ ကျယ်လာရာကနေပေါ်လာတာ၊ ဥပမာပန်းချီဆိုအရင်ကေ ဆးနဲ့ရေးရမယ်တို့၊ ဒါပေမယ့်ပစ္စည်းအစစ်တွေထည့်ကပ်တော့ ရောဘာဖြစ်သေးလဲကွာဆြိုပီး colleage တွေဖြစ်လာတယ်၊ ပန်းပုဆိုလဲအရင်ကလူရုပ်ထုတာကနေ အတုံးကြီးအတစ်ကြီးထုထည်ပါရင်ပြီးရောထုမယ်ဆိုတာတွေဖြစ်လာတယ်၊ ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အနုပညာနယ်ပယ်သတ်မှတ်မှု ၊အနုပညာဘာလဲေ ဖ်ာကျူးမှုနယ်ပယ်သစ်အတိမ်အနက်တွေချဲ့တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးဖြစ်လာတယ်၊ နောက်လဲချဲ့နိုင်သမျှပေါ်မူတည်ပြီးအသစ်တွေပေါ်လာဦးမှာပဲ၊ အနာဂတ်ကာလမှာနယ်ပယ်ချဲ့နိုင်သလောက်ချဲ့ကြဦးမှာဘဲ၊ ဆိုတော့အနုပညာတနယ်နဲ့တနယ်0verlap ဖြစ်လာလိမ့်မယ်၊ ဖြစ်လာရင်နောက်ထပ်ချဲ့မယ့်အရာတွေဟာ ပိုမိုရှုပ်ထွေးကျယ်ပြန့်လာလိမ့်မယ်၊ ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့ပြောလို့မရဘူး၊ လူတွေကလွတ်လပ်မှုကိုချဲ့ထွင်ကြတာ၊ ဥပမာရှေးတုန်းကပန်းချီရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့် ကျဉ်းကျဉ်းလေး၊ သဘာဝအလှ၊လူပုံတူရေးမယ်၊ အဲဒီကနေလူကတွေးခေါ်မျှော်မြင်တဲ့ စေတနာထည့်ပြီးဘာတွေထပ်ချင်လဲ ဘာတွေနှုတ်ချင်လဲဆိုတာတွေနဲ့ မော်ဒန်အယူအဆဖြစ်လာတယ်၊ ပန်းချီနယ်ချဲ့တဲ့အချိန်မျာ performance installation တွေပါလာတယ်၊ performance ဆိုတာက choriography art တမျိုးပဲ၊ ခုဟာကမျက်စိလည်နေတာက ပန်းချီဆရာတွေကပဲ performance လုပ်လို့ရသလားဆိုတာမျိုး၊ အမှန်ကပန်းချီရဲ့ Limit ဆိုတာကအလင်းအမှောင်၊အရောင်နဲ့ဘဲဆိုင်တာ၊ performance ဆိုတာဘယ်သူမဆိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်၊ ပန်းချီဆရာလုပ်လို့ရသလိုစာရေးဆရာလဲလုပ်လို့ရတ
ယ်၊ ကြိုက်တဲ့သူလုပ်လို့ရတယ်၊ အဲဒီတော့ performance Art ကိုပန်းချီနယ်ချဲ့တယ်မစဉ်းစားဘဲ အနုပညာသမားတွေကအနုပညာနယ်ကိုချဲ့တယ်လို့ စဉ်းစား၊ ခုနကဆိုပန်းချီဆရာက performance လုပ်ရင်ပန်းချီနယ်နဲ့ choriography art နဲ့ Overlap ဖြစ်တာ၊ အဲဒါကိုပန်းချီဆိုတာအလင်းအမှောင် အရောင်နဲ့ဘဲ ဆိုင်တာဘာဖြစ်လို့ performance လုပ်ရသလဲသွားပြောလို့မရဘူး၊ ငြင်းခုန်စရာလဲမလိုဘူး၊ သူ့လုပ်ပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်ခွင့်သူချဲ့တာ၊ သူ့ဟာသူလုပ်ချင်လုပ်မယ်၊ မလုပ်ချင်မလုပ်ဘူး၊ ဒါကိုကျွန်တော်တို့ ကန့်ကွက်စရာမရှိဘူး၊ ဒီဟာသက်သက်တော့မဟုတ်ဘူး၊ သူ့အခြေခံတော့ပါတယ်၊
ခုလို လင့်နဲ့တကွပြောပြတော့ အစုံအလင်အတော်ဖတ်ရှုရတဲ့အတွက် မသိသေးတာတွေ ဗဟုသုတ တိုးပွားရပါတယ်။ သိတာလေးတွေ မျှဝေရင်း စာအုပ်ကောင်းလေးတွေ ဝေငှ ငှားကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ကဗျာအကြောင်းတွေ လှိုင်လှိုင်ကြီး ပြောလာကြတာ…
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ့အမြင်လေးလည်း ဝေမျှပေးပါဦး။
ကာရံပါမှ ကဗျာ တဲ့လား…..။ ရင်ခုန်သံမပါရင် ကဗျာ မဖြစ်ဘူးဗျ….။ စိတ်ကူးကလည်း ကောင်းဦးမှ….။ အဲ… ဒါ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်က နေ၀န်းနီစကား……….။
ကာရံပါပြီး ကဗျာ မဖြစ်တာတွေ အများကြီး….။
တို့ အမြတ်တဲ့….။ (4-3-2) ကာရံညီနေသားပဲ အဲဒါကဗျာလား……….။
ရွတ်ဖတ်ရာမှာ အသံ(RYTHM ) ရှိနေရင်…။ စိတ်ကူး စေတနာလေးကောင်းနေရင် ကဗျာ တစ်ပုဒ်အဖြစ်ခံစားလို့ရနိုင်ပါတယ်…။ လုပ်ယူထားတဲ့ စိတ်ကူးအတွေးမဟုတ်ဘူးနော်…။ ကိုယ်တိုင်ပီပီပြင်ပြင်ခံစားရတဲ့စိတ်ကူး စိတ်သန်းကိုရေးမှ ကဗျာ ကောင်းမည်ပါတယ်…။ ကျန်တဲ့နေရာတော့မပြောတတ်ဘူး…။ ကဗျာမှာ တမင်လုပ်ယူပြီးရေးရင် ဖတ်သက်ဝါအရ သိသာတယ်…။ ကြုံလို့ပြောလိုက်မိတာ ရန်တွေ့တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်…..။
Art ဆိုတာက အပ် မဟုတ်ဘူးကွဲ့
Poem ဆိုတာ ပွမ် လို့မရဘူး …
အဲတော့ လုပ်ချင်သာတာ လုပ်
ဖန်တီးမှု များများပါ …. အားလုံးက အနုပညာလို့ ကျေအေးလိုက်ရင်
ဟိုဘက်က အရောင်သမားတွေ (ပြာ၊၀ါ) တွေလဲ ကောင်းမယ်ထင်ရဲ့
ဟိဟိ……. ပြဿနာကို မီးစက်ထွန်း ရှာခဲ့ပီ
အစ်မရေ… မွန်မွန်ကတော့ အများကြီးမသိပါဘူး… နည်းနည်းလေးလည်း မသိပါဘူး…
ဒါပေမယ့် ကဗျာဆိုရင်တော့ ကာရန်ပါတာကို ပိုကြိုက်မိတယ်… ကာရန်မပါပေမယ့်လည်း အသံသာရင် ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်….
ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ကဗျာဆိုရင် ရွတ်ကြည့်ရတာ ပိုသဘောကျလို့လေ….
ကိုယ်တိုင်ရေးရင်တော့ ကာရန်ကို လွတ်လပ်စွာ ထည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကာရန်မဲ့တော့ မရေးဖြစ်ဘူး။ ၄-၃-၂ ကာရန်.. စတာတွေကိုတော့ တစ်ခါတစ်လေမှပဲ ရေးဖြစ်ပါတယ်။
ကာရန်ရှာရတာလည်း ပျော်တယ်။ က ကနေ အ အထိ လိုက်ရွတ်ဖြစ်တယ်။
သိပ်မသိသေးဘူးသာဆိုတယ်… တော်တော်လေ့လာထားတာပဲကို… အစ်မပြောတဲ့စာအုပ်က ရှိဖို့မပြောနဲ့ …ခုမှ ကြားဖူးတာ…
မေးကြည့်ပေးနော်။ ရှိတယ်ဆိုရင် အမ ဖတ်ချင်လို့ လာရှာနေတာ ခုထိမတွေ့သေးဘူး။ ကျေးကျေးနော်ညီမလေး…
ဒါ Si Tone ဖတ်သင့်တယ်ထင်တယ်……
မမ မနော…..ေ၇ Si Tone အဲဒီ စာအုပ်တွေကိုဖတ်ချင်တယ်…….
ဒီပိုစ့်တက်လာတုန်းက မော်ဒန်ဆရာတွေ ၀ိုင်းဆဲတော့မှာပဲလို့ထင်ခဲ့တာ…..
ကာရံမဲ့ကဗျာကို အဲသည်ဆရာကြီးတွေ အဲသလိုပြောခဲ့တာက ဟိုးရှေးတုန်းကပါ
အဲသည်ဆရာကြီးတွေ အခုရှိသေးရင် အဲသလို ပြောတော့မှာ မဟုတ်ပါ
ဂန္တ၀င် နဲ့ မော်ဒန် ဆိုတာ
သူ့စံ သူ့ ပေတံနဲ့သူ
သပ် သပ် စီပါ
အဲ့ဆရာကြီးတွေ မော်ဒန် ကဗျာကို(မော်ဒန်ကဗျာရေးတဲ့ လူငယ်တွေကို) နားမလည်ကြလို့…ပြောတာ…
နားလည်သွားရင်.. ကာရန်ကို ဘာလို့ စွန့်လွှတ်ချင်ကြတာလဲလို့… ဘယ်ပြောတော့မလဲ…
နားလည်ဖို့ ကြိုးစားရာမှာလည်း …
ကိုယ့် မူလ က စွဲ ယူထားတဲ့ ဝါဒစွဲတွေ / စံ / သတ်မှတ်ချက် အစွဲလေးတွေကိုတော့
ခွါချ ထားခဲ့ သင့် / ထားခဲ့ပေရမှာပေါ့…
မော်ဒန် ကဗျာကို ဂန္ထဝင် နှလုံးသားနဲ့တော့ ခံစားနေလို့တော့ ဘယ်ရမလဲ ။
ကျွန်တော် အရမ်းကြိုက်တဲ့ စကားနဲ့ ပြောရရင်တော့ . . . .
သူ့ ဘက်ကမ်းက မီး ဘယ်လောက် လင်းသလဲ သိချင်ရင် . . . …….
ကိုယ့်ဘက်ကမ်းက မီးကို မှိတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာ ။
.မော်ဒန်ကဗျာကို ရေးသားဖန်တီးနေတဲ့ မော်ဒန် လူငယ်တွေရဲ့ နှလုံးသား(ခံစားမှု)ကို ဝင် ပူးကြည့်ရမယ် ။
.သူတို့အတွေးးး သူတို့အယူအဆ /သူတို့ စိတ် ခံစားမှု / သူတို့ ယုံကြည်ရာ နောက်ကို သူတို့နဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ လိုက်ပါကြည့်ရမယ် ။
သူ့ အနုပညာ ကမ်းစပ်ကို လွတ်လပ်စွာ ခြေ ချကြည့်သင့်တယ်ဆိုပါစို့ ။
.ကာရန်ကိုမှ တမ်းတမ်းစွဲ ချစ်နေသူတွေကို မော်ဒန် မြစ်ထဲ ဆင်းကြည့်စေချင်တာ.. ။
(အနုပညာ ခံစားမှု အားကောင်းခြင်းးးဆိုတဲ့ ရေကူးးးတော့ ကျွမ်းကျင်ပါစေ ပေါ့ ။)
### အနုပညာရဲ့ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အစဉ် နှင့် အဆင့် သုံးဆင့် ###
မော်ဒန်အနပညာ ( ခေတ်သစ် အနုပညာ ) ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို …..ရ / တတ်သလောက်..လေ့လာနေမိပါသည် ။
ပြောချင် ရေးချင်လာသော..အတွေး.များကို..ချရေးမိပါသည် ။
ဤ စာတမ်းသည်…. ယခု တွေးမိသော အတွေးကို..ရေးသားတင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည် ။
”ယခု တွေးမိသော..အတွေး.”ဆိုသည့်စကားလုံးကို….အသေအချာ ပြောခဲ့ပါသည် ။
လူ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ..စံနှုန်းများ / အတွေးအမြင်များဖြစ်စေ…
အနုပညာဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်နှင့် တန်ဖိုး..နှုန်းစံများဖြစ်စေ…
တစ်ချိန်ချိန်တွင်.. ဖြစ်ပေါ်တိုးတက် သွားသော..အလှည့်အပြောင်းများနှင့်
ထို အပြောင်းအလဲများ.ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်… ရှိနှင့်ပြီးသား..တန်ဖိုးများ / စံ..နှုန်းများ..ယုတ်လျော့ပျက်စီးသွားခြင်း မဟုတ်ပါ ။
ရှိနှင့်ပြီးသား..တန်ဖိုးများ ဆိုင်ရာ.အချင်းအရာများထက်… ပို၍ ကျစ်လျစ်သော /
ပို၍ လခှပ သစ်လွင်သော..တန်ဖိုးသစ်များ ( စံ နှုန်းအသစ်များ ) ဆီသို့ … ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
ယုတ်လျော့ ပျက်စီးသွားခြင်း မဟုတ်ပါ ။
အဟောင်းသည်..အဟောင်းဆိုင်ရာ ဂ န္ထ၀င်တန်ဖိုးများနှင့်.. သူ့ ဟန်နှင့်သူ..ကျန်ရစ်ခဲ့ပါလိမ့်မည် ။
အသစ်သည်..ခေတ်မီတောက်ပသော.. သစ်လွင်မှု နှင့် ( တန်ဖိုး နှုန်းစံအသစ်များနှင့် ) ဆက်လက် ချီတက်နေပါလိမ့်မည် ။
နောင်တစ်ချိန်တွင်…. ထို အသစ်များသည်.လည်း.. အဟောင်းဖြစ်သွား၍ နောက်ထပ် အသစ်အသစ်သော..အရာတွေက….ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ် တိုးတက် လာဦးမည် .။
အဲဒါ..သဘာဝတစ်ခုသာဖြစ်၍…. မကျေနပ်စရာ မရှိပါ ။
ဆွေ့ ဆွေ့ ခုန် နေ…စရာ…. မလိုပါ ။
အသစ် ၏ ၀င်ရောက် နေရာယူမှု ကို လက်မခံနိုင်လောက်အောင်…. ဖြစ်နေသူများ.. ရှိပါသည် ။
( ထိုသူများ ရှိ်နေ၍လည်း..ဤ စာမျိုးတွေ.ရေးနေရခြင်း ဟု.ဆိုနိုင်ပါသေးသည် ။)
အဟောင်း ၏ တန်ဖိုး မှ တကယ့် တန်ဖိုးအစစ် ဟု ထင်နေကြသူများ….ဖြစ်သည် ။
ကာရန် မပါရင်..ကဗျာ မဟုတ်သယောင်ယောင် …ဆိုကြသူများ…။
ဇာတ်လမ်း မပါရင်..၀တ္ထု မဟုတ်ဘူး..ဆိုသူများ…(ဇာတ်လမ်းမပါတဲ့ စာကို..စာပေအနုပညာစာရင်း မသွင်းချင်သူများ)
နတ်သျှင်နောင် ၏ ရတုတစ်ပုဒ်နှင့် … မော်ဒန် ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို… ယှဉ်..နှိုင်းပြီး.. နတ်သျှင်နောင် ၏ ရတုကိုသာ..အနုပညာ တန်ဖိုး ပိုကြီးသည်…ဟု..ထင်နေကြသူများ..
ထိုသူများသည်…. ဂန္ထ၀င် အနုပညာ ၏ လှပ မှုကို… စွဲလမ်း မက်မောရင်း….ပျောက်ကွယ်သွားမှာကို.. စိုးကြောက်သူများ..ဖြစ်သည် ။
အပြစ် မဆိုသာ..သော်လည်း..ပြောစရာတော့..ရှိနေပါသည် ။
နေ၀င်သွားတာကို..မျက်တောင်မခတ်.. လိုက်ကြည့်နေပြီး… နှမြောတသ…လွမ်းမောနေရင်… လ ..ထွက်လာတာကို…မမြင်လိုက်ရပဲ…
တကယ်တော့…. ဂန္ထ၀င် အနုပညာ သည်လည်း… သူ့ အနုပညာတန်ဖိုး နှင့်သူ….
မော်ဒန် အနုပညာ သည်လည်း..သူ့ အနုပညာတန်ဖိုးနှင့်သူ. …တည်ကြည်စွာ..ရှိနေပါသည် ။
အဟောင်းကိုမှ…မက်မောစွာ..ဖက်တွယ်ထားသော..လက်များ…ကို.. အသစ်ကြိုသော လက်များ အဖြစ် အသင့် ..ဖြစ်စေချင်ပါပြီ ။
နေရာထိုုင်ခင်း ရှင်းလင်းပေး၍ ကြိုဆိ်ုပါ ။
နွေးထွေးစွာ… ကမ်းလင့် ခရီးဦး..ကြိုပြု ပါ ။
အနုပညာသစ်သည်…. အနုပညာ ၏ သည်းနင့် ရင်ခွင် ဆီ… ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လှမ်း..လာနေပြီ ။
ဆွေ့ ဆွေ့ ခုန်နေစရာ..မလိုပါ ။
အနုပညာသစ် ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု ဖြစ်စဉ်သည်… ဆွေ့ ဆွေ့ ခုန်နေစရာ…ကိစ္စ မဟုတ်ပါ ။
၀က်ဝက်ကွဲ ငြင်းဆန်… နေစရာလည်း.မလိုပါ ။
အနုပညာသစ်ကို..ချစ်သော အနုပညာသမားများသည်…. ဘာ့ကြောင့်… ချစ်ရသလဲ..ဆိုသော..မေးခွန်းကို.. ဘယ်သူမှ မမေးခင်..ကိုယ့်ဘာသာ ဖြေပြီးမှ…ချစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
ထုံတမ်းအစဉ်အလာ စည်းမျဉ်း / နယ်နိမိတ် / ကန့်သတ်ချက် များ… ရုန်းမထွက်နိုင်လောက်အောင်…ချုပ် ထားသော.. တင်းကျပ် ပိတ်ဆို့ မှု များကို..ရိုး..အီ..ငြီးငွေ့ လာသော…
အလွန့် ( အလွန် ) စိတ်ပျက် လာသော..
အနုပညာသမားသည် အနုပညာ ၏ သဘောသဘာဝ ကို… စူးစူးရဲရဲ… ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီ ။
အနုပညာ ၏ သစ္စာ တရား…ကို မမှိတ်မသုန်…တူးဖော်….ခဲ့ ပြီ ။
အနုပညာ ၏ လွတ်လပ်ခွင့်ကို…လည်း..မြတ်နိုး..ခုံမင်စွာ..တမ်းတ တတ်ခဲ့ပြီ ။
အနုပညာသည်… ဖန်တီးခြင်း ၏ အမြုတေ ဖြစ်သည် ။
အနုပညာ ဖန်တီးမှု…၏ အထက်မှာ..ဖြစ်စေ…/ ဘေး ပတ်လည်မှာ.. ဖြစ်စေ….မည်သည့် စည်း မျဉ်း ကန့်သတ်ချက်များမှ..
အနုပညာ ၏ နယ်ပယ်သည်… ကျယ်ပြန့်သော..ကောင်းကင်ကြီးသာ..ဖြစ်ရမည် ။
အနုပညာနှင့်.. အနုပညာသမား ၏ လွတ်လပ် လိုမှု / လွတ်လပ်စွာ..ဖန်တီး ရေးသား..လိုမှု ကို..
အစဉ်အလာ…ဆိုသော..စည်းမျဉ်း…နယ် နိမိတ်များ က… လာ…လာ…မချုပ်စေလို …………………..။
ထိုသို့ ဖြင့်…. …………………….
လွတ်လပ်မှု ကို မြတ်နိုးသော…. အနုပညာသမားသည်…
အနုပညာဖန်တီးမှု လမ်းစဉ် တလျှောက်…. လိုက်လံ တားဆီး..ချုပ်နှောင်နေသာ..
တံတိုင်း စည်း / မျဉ်းများကို…စ တင် ဖောက်ထွက်ပါတော့သည် ။
လက်ညှိုးထိုး…ကဲ့ ရဲ့ မှုများ../ လှောင်ပြောင်သရော် မှုများ../ စွပ်စွဲ ပုတ်ခတ်မှုများ…ကို..
အများနှင့် မတူုသာ.. လုပ်ရပ် ../ အစဉ်အလာ ၏ တင်းကျပ် ပိတ်ဆို့ မှု ကို…ဖောက် ဖျက်သော… အနုပညာ ဖန်တီးမှု.များသည်….
အရှိန် အဟုန်လည်း ရှိ ../ သတ္တိ နှင့် ခံနိုင်ရည်..လည်း… တော်တော်လေး..ရှိခဲ့ပါသည် ။
အခုတော့..အနုပညာသစ်သည်…. အနုပညာကောင်းကင်ပေါ်မှာ.. ပျံသန်း လာနေပြီ…။
အဟောင်းကို…. ဖက်တွယ်ထားကာ..အစဉ်အလာ ၏ စည်း / မျဉ်း / ဘောင်ခတ်မှု အကျပ်အတည်း ထဲမှာ… ဆွေ့ ဆွေ့ ခုန်……နေသူများကို…..အံတု ကာ….
လေ အဟုန်မှာ.. ပျံသန်း ပြနေလေပြီ ။
အနုပညာသစ် ၏ ထိုးဖောက်မှု / ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု ဖြစ်စဉ် တလျှောက်တွင်… အဆင့် ( ၃ ) ဆင့်ကို… ဖြတ်ကျော် ရပါမည် ။
( ကျွန်တော်.. လက်ခံသော..အဆင့် ( ၃ )ဆင့် ဖြစ်ပါသည် ။ အမြင်မတူ သူများလည်း.ရှိနိုင်ပါသည်.ဟု ကြို ပြောချင်ပါသည် ။ )
ထို…. အဆင့် ( ၃ ) ဆင့်မှာ.. အောက်ပါ အတိုင်း..ဖြစ် ပါသည် ။
အနုပညာ တန်ဖိုးများ / နှုန်း စံ များ../ အချင်းအရာများ ကို
လူသားတို့တဆင့်ပြီးတဆင့် ဖန်တီး တည်ဆောက် ခဲ့ကြရပါသည် ။
ထိုအရာများသည်… ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု ( သို့ မဟုတ် ) အပြောင်းအလဲများကို
တကွေ့ ကွ့ မှာ..ကြုံကို ကြုံကြရပါသည်။
ဖြစ်ပေါ်တိုးတက် မှုများကိုကြုံတိုင်း…အဆင့် ( ၃ ) ဆင့်ကို ဖြတ်ကျော် ရပါသည် ။
ထိုအဆင့် ( ၃ ) ဆင့်မှာ……
( ၁ ) ပိုင်းစ စိတ်မွှာ ပြိုကွဲ သွားခြင်း
( ၂ ) ပြန်လည် စုစည်းတည်ဆောက်ခြင်း
( ၃ ) အသစ်များ ဖန်တီး ဖော်ထုတ်ပြ ခြင်း…….. တို့ဖြစ်ပါသည် ။
( ၁ ) ပိုင်းစ စိတ်မွှာပြိုကွဲသွားခြင်း
ပထမဆုံး အဆင့် သည်…အသံကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ဖြင့်…ဆူညံ ရှုပ်ထွေးတတ်ပါသည် ။
ပြဿနာ အဖြစ်ဆုံး…. အဆင့်လည်းဖြစ်ပါသည် ။ ရှိနှင့်ပြီးသား…. စံနှုန်းများ../
စည်း / ဘောင် / ခွင် / နယ် နိမိတ် များကို….. ကျော်ဖြတ် ထိုးဖောက်၍ အသစ် အသစ်သော….ချင်းအရာတို့နေရာ ၀င်ယူ ချိန်မို့ ….
သည်းသည်းလှုပ်သူများ…များလျှင် များသလောက်…. ပြင်းထန်စွာ..တုန်ခါ..တတ်ပါသည်။
အပေါ်ယံလေးတွေးသူများ နှင့်…. အမြင် ..မကြည်လင်သူများ ကတော့…
ရှိနှင့်ပြီးသား…. စည်း / မျဉ်း / စံနှုန်း / ဘောင် / ခွင်….နယ်နိမိတ်များ ကို ဖောက်…. ဖြတ် ၍
အသစ်အသစ်သော… စံနှုန်းများ..တန်ဖိုးများ…ဖြင့် ဖြစ်တည်လာသော….
ထိုအနုပညာ ဖန်တီးမှု ( အသစ် ) ကို… စည်းမဲ့/ ကမ်းမဲ့သရုပ်ပျက်ယွင်းမှု /
ထင်တိုင်းကြဲ..ဖော်ထုတ်ပြသ မှု များ… ဟု..သတ်မှတ်ချင်ပါလိမ့်မည် ။
အဟောင်းကို…. တပ်မက် စွဲလမ်းမှု..အား..ကြီးလေလေ…အသစ်ကို…. အထင်သေးမှု / မလိုလားမှု များ..ပြင်းထန်လေလေ….။
အနုပညာ ၏ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်…ဖန်တီး မှု နယ်ပယ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကိုမှ လိုချင်သော../
ရှိနှင့်ပြီးသား…နှုန်း စံ အဟောင်းများ / စည်းမျဉ်း..ဘောင် / ခွင်…အဟောင်းများ ၏ တင်းကျပ်စွာ.. ပိတ်ဆိုးမှု ကို မကျေမနပ် ဖောက်ထွက်ချင်သော….
အနုပညာ နှင့် အနုပညာ ဖန်တီးသူ…တို့ကို..
ရှေးရိုး အစဉ်အလာ / သမားရိုးကျ ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထပ်က… စံနှုန်းများနှင့်.. နေသားကျနေသော…
( အဟောင်းမှ အဟောင်း ဆွေ့ ဆွေ့ ခုန်နေသော…) ပုဂ္ဂိုလ်များက…. အမြင် ကြည် နိုင်မည် မထင်ပါ ။
နွေးထွေးသော လက်များဖြင့် ကြိုဆိုဖို့ …အသာ ထားလို့ ….သူတို့ဖက်တွယ်ထားသော… အရာများကို..လွှတ်ချပြီး.
အသစ် ၀င်ရောက် လာမည့်အရာကို….လက်ယပ်ခေါ်ဖို့ …ပင် မအားနိုင်ပါ ။
အသစ် ၀င်ရောက်လာမည့် အရာကို တန်ဖိုး ရှိသော အရာ များ..ဖြစ်နေမလား..ဟုပင်…. ကြည့်/ မြင်..နိုင် ..အားမည်..မထင်ပါ ။
သူတို့ ..ဆွေ့ ဆွေ့ ခုန် ပြီးရင်း..ခုန်နေကြသည် ။
္ကဤ အဆင့်သည်… ထိတ်လန့် တုန်လှုပ် ဖွယ်ရာ အဖြစ်ကြီးအဖြစ်…. သူတို့ ..ဆွေ့ ဆွေ့ ခုန်လို့ကို..ပြီးမှာ… မဟုတ်.. ။
အနုပညာသမား နှင့် အနုပညာ ၏ သဘောသဘာဝ ကိုက….တစ်ချိန်ချိန်မှာ…
မလွဲမသွေ… ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု…/ ပြောင်းလဲသော..ဖန်တီးမှု ဖြစ်စဉ်များနှင့်.ကြုံကိုကြုံရမည် ။
အနုပညာသည်….ပုံသဏ္ဌာန် ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း ပြောင်း…. /
ဖော်ဆောင် ပုံ..ဟန်များ../ စနစ်များ..ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း…
အနုပညာသည်..အနုပညာ ဖြစ်နေဖို့သာ..လိုပါသည် ။
အနုပညာ ၏ အနုပညာ ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည် ။ အနုပညာ ၏ ပကတိ တန်ဖိုးသည်…. အခြေအနေတွေ… ဘာတွေ ဘယ်လိုပြောင်းနေပါစေ…
အနုပညာမြောက်နေ လျှင် အနုပညာဖြစ်နေမှာသာ..ဖြစ်သည် ။
လောက တွင်… အနုပညာရပ် များ …. များစွာ ရှိနေပါသည် ။
သရုပ်မှန် အနုပညာ / ဂန္ထ၀င်အနုပညာ / ခေတ်သစ်အနုပညာ / ခေတ်ဟောင်းအနုပညာ / မော်ဒန် အနုပညာ / ပို့ စ်မော်ဒန် အနုပညာ …
ဂီတ အနုပညာ / ရုပ်ရှင်အနုပညာ /
စာပေ အနုပညာ / ပန်းချီ အနုပညာ / ပန်းပု အနုပညာ……
အနုပညာရပ်များ…များစွာ..ကွဲပြား… ခြားနားစွာ..ရှိနေပါသည် ။
ဓါးရှည် / ဒါးတို / ဓါးမ / ဓါးမျြောင် /
ငှက်ကြီးတောင်ဓါး…/ ခေါက်ဓါး./ ပေါက်ဓါး…. စသည်ဖြင့်…..
ဓါး အမျိုးအစားပေါင်း များစွာ..ကွဲပြား ခြားနားစွာ..ရှိနေပါသည် ။
အနုပညာရပ် များ..များစွာ…. အမျိုးအစား ကွဲပြားခြားနားသလို..ဓါးများလည်း..အမျိုးအစားများစွာ..ကွဲပြား…ခြားနားပါသည် ။
ဓါး အမျိုးအစား ဘယ်လောက်ပဲ..များများ…………………
ဓါး ၏ ဂုဏ် သတ္တိ နှင့် ဓါး ၏ သဘော…မှာ.. တစ်ခု ထဲသာ..ဖြစ်ပါသည် ။
ဓါး သည်..ဓါး..ဖြစ်နေ ဖို့သာ ..လိုပါသည် ။
အနုပညာရပ်တွေ… ဘယ်လောက်ပင် များနေပါစေ…………….
အနုပညာရပ်တွေ… တစ်ခုနှင့်တစ်ခု… ဘယ်လောက် ပဲ…မတူ ကွဲပြား ခြားနားနေပါစေ…..
အနုပညာ ၏ ဂုဏ်သတ္တိ နှင့် အနုပညာ ၏ သဘောာ…( ထပ်ပြောပါမည် အနုပညာ ၏ သဘော ) ကတော့….
တစ်ခု တည်းသာ..ဖြစ်သည် ။
အနုပညာ မြောက်နေဖို့ သာ…..
လိုပါသည် ။ ((( ဓ = ဓါးသွားပေါ်မှာ..လမ်းလျှောက်ခြင်း… ( ဓါး…. အက်ဆေး )
http://myanmargazette.net/151141/arts-humanities …………. မှ……………….. ) ))))
( ၂) ပြန်လည် စုစည်းတည်ဆောက်ခြင်း
ဤ အဆင့်သည်..စစ်ပြီးစ..မြေပြင်လိုတော့…. အပျက်အစီး အပဲ့အရွဲ့ များဖြင့်
တိတ်ဆိတ် မှုတော့ အနည်းငယ်..ရှ်ိလာပါသည် ။
ဆူဆူညံညံ ဆွေ့ ဆွေ့ ခုန်နေကြသူများကလည်း…. ဘာများ… ဆက်ဖြစ်လာမှာပါလိမ့် ဆိုသော…. အတွေးများဖြင့်….
တချို့ ကတော့…ဒီ အသစ် .ကြားကြာလည်း.ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး….. ဟုသော..ကိုယ် ထင်ရာ…
နိမိတ် ဖတ်ပြီး… သနားကြည့် နှင့်… မိုက်ကြည့်..ကို ရောမွှေပြီး..ကြည့်နေကြပြီ ။
ကောက်ရိုးမီး..အနုပညာ..ဖြစ်မသွားဖို့ကိုတော့…. အနုပညာ သမားတို့ ၏ ဖန်တီးမှု..စွမ်းအား..နှင့် အမှန်တရား….က… အဆုံးအဖြတ် ပေးပါလိမ့်မည် ။
ပြန်လည် စုစည်း တည်ဆောက်ခြင်း…ဆိုရာတွင်….
ပျက်စီးသွားသော…. အပဲ့အရွဲ့ များ. … / သီအိုင်္ရီ အစုတ်အပျက်များ…/ စံနှုန်း အကျိုးအပဲ့များ…ကို.. တစ်စ စီ…
လိုက်……ကောက်ပြီး…. ပြန်လည်… တည်ဆောက်ခြင်း..မဟုတ်ပါ ။
လုံးဝ မဟုတ်ပါ ။
ချုပ်ရိုးကြောင်းတွေ… သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဖြစ်သွားရုံနဲ့ ….. ၀တ်ရုံက သစ်မသွား မှန်း..သိကြ့ပါသည် ။
ပြန်လည် စုစည်းတည်ဆောက်ခြင်း….ဆိုသည်မှာ…. စံနှုန် အသစ်များ…
တန်ဖိုး အသစ်များ……နှင့်…. အနုပညာသစ် ၏ သဘောတရားသစ် ဆိုင်ရာ..အချင်းအရာများကို…..
စုစုစည်းစည်း… ဖြစ်အောင်….. တည်ဆောက် ယူလိုက်ကြခြင်း ကို…ဆိုလိုပါသည် ။
အခြားအခြားသော…. အသစ်များကို… ဆွဲ..ယူ.စုစည်းလိုက်ခြင်းမဟုတ်သေးပါ ။
ဆိုလိုသည်မှာ..အနုပညာနယ်ပယ် ထဲမှ…..ပင်..စုစည်း..တည်ဆောက်ပါသည် ။
ဥပမာ…. ကဗျာ…။ ကဗျာကို… ပုံသဏ္ဌာန် အသစ်များ./ စံ../ နှုန်း / ဟန်… အသစ်များ… ဖြင့်… ပြန် တည်ဆောက်ဖန်တီး ကြသော်လည်း…
ဘာသာစကားကို.တော့…… ပစ်ပယ်လို့ မရပါ ။
ကာရန် စနစ် နှင့်..ခေတ်ဟောင်းက စံနှုန်းများကို..ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း…… ပြောင်းလဲလို့ ရချင်ရမည် ။
ဘာသာစကားကိုတော့..ပြောင်းလို့ ..မရပါ ။
ဘာသာစကားအသစ် ကိုအသုံးပြု ၍ မရေး ပါ။ ၀တ္ထုများတွင်လည်း…. ဇာတ်လမ်းနှင့် အကြောင်းအရာ… /
အစီအစဉ်ကျန ညီညွတ်မှု..များကို… စွန့်ချင်..စွန့်မည် ။
၀ါကျ အထားအသိုကိုပင်..ဖောက်လွှဲဖောက်ပြန်..ပြုချင်..ပြုမည် ။ သို့ သော်…ဘာသာစကားကိုတော့……
စွန့်ပစ် ၍ မရပါ ။
အသစ် ဖြစ်တည် ရှင်သန်လာဖို့ ….
အနည်ထိုင် အသားကျဖို့ ..ကြိုးစားတည်ဆောက်ကြခြင်းလည်း..ဖြစ်ပါသည် ။
အဆင့် ( ၃ ) ကို..ဆက်လက် တင်ပြ ပါဦးမည် ။
( ၁ ) ပိုင်းစ စိတ်မွှာ ပြိုကွဲသွားခြင်း
( ၂ ) ပြန်လည် စုစည်းတည်ဆောက်ခြင်း . . . . . စသော အဆင့်များကို ဖြတ်ကျော်ပြီးသွားလျှင်
အဆင့် ( ၃ )ကို ရောက်ချေပြီ ။
အဆင့် ( ၃ ) သည် အသစ်ဖန်တီး ဖော်ထုတ်ခြင်း ဖြစ်ပ်ါသည် ။
ဒုတိယ အဆင့်မှာ အနုပညာကို ချစ်မြတ်တွယ်တာသော / ဇွဲကောင်းဖြင့် အနုပညာကို ချစ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များက ကြိုးစားကာ စုစည်း တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။
ယခု နောက်ဆုံး အဆင့်မှာတော့ အနုပညာသည် အခြေကျပြီ။
ဤ အဆင့်တွင် မိမိတို့လက်ခံ ယုံကြည်သွားသော အနုပညာကို ကျကျနန ဖန်တီး ပြဖို့သာ. . . .။
ဝေဖန်သူတွေ ဘာပြောပြော / လေကန်သူတွေ ဘာပြောပြော အချိန်တန်လျှင် ရပ်သွားပါလိမ့်မည် ။
ဖန်တီးသူ ၏ အလုပ်မှာ . . .ဖန်တီးခြင်းသာ ဖြစ်သည် ။
အသစ် ဖန်တီးခြင်းများ အလျှို လျှို ပေါ်ပေါက်ထွန်းကား လာသောအခါ အဟောင်းများ ပျက်စီး ပျောက်ကွယ်သွားမှာလား . . . . ဟု လည်း မေးစရာ မလိုပါ ။
အဟောင်းများသည် အဟောင်း အနေအထား ဖြင့် တန်ဖိုး တစ်စုံတစ်ရာ ရှိမြဲ ။
အနုပညာသမိုင်းမှာ မပျောက်မကွယ် ရှိဆဲ။
အဟောင်းမှ အဟောင်းပဲ ဆိုသူများ ချစ် မက် တွယ်တာ ဖက်တွယ် ထားလို့ရမြဲ / ရဆဲ. . . . . ။
အဟောင်းသည် တစ်ချိန်က အသစ်ဖြစ်ဖူးတယ် ဆိုသော ဂုဏ် သတ္တိဖြင့် အနုပညာသမိုင်းမှာ သူ့နေရာ နဲ့ သူ. . . .
ဆွေ့ ဆွေ့ခုန်နေစရာ မလိုပါ ။
အသစ်နှင့် အဟောင်းကြားမှာ ဗျာ များနေစရာလည်း မလိုပါ ။
ကိုယ့် အလုပ် ကိုယ် ဆက်လုပ်ကြ ဖို့ သာ လိုပါသည် ။
ကိုယ့်တာဝန်တော့ ကိုယ် ကျေရမည် ။
ယခု ကျွန်တော်တို့ အနုပညာလောက ဘယ် အဆင့်မှာ ရောက်နေပြီလဲ။
အဲဒါလေး ဆက်တွေး ကြည့်ရ အောင်လား ။
ဆွေ့ ဆွေ့ခုန်ပြီး တွေးစရာ မလိုပါ ။
အေးအေးဆေးဆေး တွေးလည်း ရပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ အနုပညာလောက ၏ အခြေအနေ ဘယ် အဆင့်မှာ ရောက်နေပြီလဲ ။
၁ ။ ။ ပိုင်းစ စ်ိတ်မွှာ ပြိုကွဲသွားခြင်းထဲမှာလား
၂ ။ ။ ပြန်လည် စုစည်း တည်ဆောက်ခြင်းထဲ မှာလား
၃ ။ ။ အသစ် ဖန်တီး ဖော်ထုတ်ခြင်းထဲမှာလား
စကား မကျန်အောင် ရှင်းခဲ့ပါရစေ ။
၁/ အနုပညာဆိုင်ရာ ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှု ပြောင်းလဲမှု အဆင့် သုံးဆင့်ကို . .
ဖတ်ခဲ့သော စာများ အချက်အလက်များ ကို အခြေခံ၍ ဆ ပွါး တွေး / ရေး ခဲ့ပါသည် ။
ကိုယ်တိုင်တွေးသော အတွေးများ နှင့် ဖတ် / မှတ်ခဲ့ သော အချက်အလက်များကို ရော နှော တင်ပြခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံ အပ်ပါသည် ။
၂/ ယခု ( ယခု ) အချိန်တွင် တွေးမိသော အတွေးစ များကို ရိုးစင်းစွာ / ရိုးသားစွာ တင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည် ။
၃ / ကျွန်တော့်ထက် တတ် သိ နားလည် သူများ ကျွန်တော့် စာတမ်းကလေးထက် ပို၍ပြည့်စုံသော /ပို၍ မှန်ကန် ကောင်းမွန်သော အနုပညာ စာတမ်းများ
ရေးသားပြုစု ကြ စေလိုပါသည် ။ အနုပညာလောကအတွက် ကောင်းကျိုး များလာဖို့ ကို ရည်ရွယ်ပါသည် ။
၄/ ဤစာတမ်းသည် မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ရေးခဲ့သောသာမန် အတွန့် တက် စာတမ်း တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည် ။
လိုနေသော / ပိုနေသော အချက်များ ပါနိုင်ပါသည် ။
မှားတာ တွေ့လျှင် ပြင်ပေးကြပါ ။ အပြင် ခံချင်လို့ ကို . . . ရေးပါသည် ။
၅/ မည်သူ့ကိုမှ အပြစ်တင် လိုခြင်း မရှိပါ ။
တိုက်ခိုက် ထိုးနှက် စော်ကားလိုခြင်း မရှိပါ။
အနုပညာ အကြောင်းပြောချင်လွန်းလို့..လျှာ နှင့် လက်များ / အတွေးများ အားယားနေလို့ ရေးခြင်းသာဖြစ်သည် ဟု ယူဆလည်း ရပါသည် ။
၆ / ကျွန်တော် လက်ခံယုံကြည်ရာကို တင်ပြခြင်းသာဖြစ်၍ အခြားလူများ လက်ခံ / မခံကိစ္စသည်… ကျွန်တော်နှင့် မဆိုင်ပါ ။
အမြင်မတူသူများ လွတ်လပ်စွာ / ငြိမ်းချမ်းစွာ သဘောထားကွဲလွဲ နိုင်ပါသည်. . .။
အနုပညာ ၏ ငြ်ိမ်းချမ်းသော… ရင်ခွင် ရိပ် အောက်မှာ…